मधेस त्यो विषय हो, जसको विनाश कसैले गर्न सक्दैन: राणा - नेपालिक्स
मधेस त्यो विषय हो, जसको विनाश कसैले गर्न सक्दैन: राणा
रोशन सिंह राणा युवा प्रतिनिधत्वका एक त्यो पात्र हुन जसले मधेस आन्दोलन देखि हालसम्म मधेस राजनीतिको निम्त्ति आफ्नो लगानी यथावत गर्दै मधेसप्रति समपर्ण जनाउँदै आइरहेका छन।
राष्ट्रीय युवा संघको राजनीति, राजपा अध्यक्ष मण्डल सदस्य अनिल झाको निकट पात्र मानिने राणाको ग्राउंड राजनीतिसँग निकट संबन्ध रहेको छ।
महोत्तरी निवासी उनको हालको बसाई जनकपुरको वडा -८ मा रहेको भएतापनि निरन्तर दुबै जिल्लामा राजनीतिक रूपले सक्रिय व्यक्तित्व हुन।
हालै उनी सँग नेपालिक्सको लागि गरिएको वार्ताको सारांश –
स्वागत छ राणा जी, नेपालिक्स छोटो कुराकानीमा ?
– धन्यवाद छ तपाईलाई , स्वागत पनि!
राणा जी, मधेस नै किन?
-बलिदानी गर्ने वीर सहीदको सपना साकार पार्न!
ए, होला, तर तपाई किन ?
– म मात्र कहाँ छु मधेसप्रति आफ्नो संवेग राख्ने त्यस्ता अनेक म जस्ता युवाहरू प्रतिबद्ध छन। म त प्रतिनिधि पात्र हुँ, जस्तो लाग्छ!
अनि कस्तो चल्दैछ आजकल राजनीतिक सरगर्मी तपाईंको घर जिल्लामा राजनीतिमा होमिएको छ अहिले चुनाव थालिएको छ?
– हो, पिपरागाउँ पालिका आफ्नो अध्यक्ष गुमाए पछि अहिले नयाँ नेतृत्वको खोजीमा छ ,त्यसमा अलिक अहिले उता चुनावी सरगर्मी छ।
कसको समर्थनमा हुनु हुन्छ?
– ऑफकोर्स, राजपा! राजपा कै पूर्ण बहुमत थियो र रहनेछ, स्वर्गीय मेयर बिनोद चौधरी ज्युको श्रीमती यस पाली चुनावमा होमिनु भएको छ। उहाँको जनमत राम्रो छ ।
अस्ति एउटा मैले तपाइको अभिव्यक्ति पढेको थिए,’ मधेशी युवाहरुलाई सबैले प्रयोग मात्र गरेको छ, नेतृत्व दिन मानेको छैन । युवालाई नेतृत्व दिएको भए आज राजनीतिक द्वन्द हुने थिएन? ‘अनि फेरी त्यसैको पछाडि दौड धूप गरी राख्नु भएको छ?
– हेर्नुस, त्यो मेरो अंतरात्माको स्वर हो , युवा प्रयोग भएको हो, तर युवा प्रयोगको पात्र हुनु पर्दैन। हामी सजग हुनु पर्छ। एक हुनु पर्छ मेरो तातपर्य त्यो हो। ठगिनु हुँदैन। प्रयोग गरेर फयाल्न खोज्नेलाई तह लगाउनु पर्छ। मैले त्यस्तालाई मुँह तोड़ जवाफ समय समयमा दिएको छु। यसको मतलब यो होइन कि हामी राजनीति त्याग गर्ने हो।’
तपाई गजेंद्र बाबुको कुरा गरेको पनि सुनेको छु , के हो त्यो मूल कुरो?
– वि. स.२०४७ सालमा सात कक्षामा पढ्दथे । मधेशमा गजेन्द्रनारायण बाबु नेतृत्वको सद्भावना पार्टी थियो । मधेशी जनताको अधिकार सुनिश्चित पार्नका लागि सद्भावना पार्टीले आन्दोलन डाकेका थिए । विद्यालय-विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरुलाई मधेशी जनताप्रति भई रहेको विभेद र आजादीको कुरा गर्दथे । त्यतिबेलादेखि नै आफू राजनीतिमा आएका हौं । गजेन्द्र बाबु नेतृत्वको पार्टी कैयौं टुक्रामा विभाजित पनि भए ।
अनि तपाईलाई कुन कुराले मधेस राजनीतिप्रति ठडयाएको छ?
– त्यो मेरो वयक्तिगत सचेतना र मधेसप्रतिको मोह र राज्य द्वारा गरिएको विभेदले निम्तयाएको म भित्रको कटुताको उपज हो।
अहिलेको मधेसी जनप्रतिनिधिहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, खास गरेर तपाइकै राजपाबाट प्रतिनिधित्व गर्नहरू?
– जति मात्रामा हुनु पर्ने त्यति छैन। तर चाहिने अधिकार प्राप्तिको लड़ाईमा यस्ता झीना मसिना पात्रहरुले मलाई र मेरो मधेसप्रतिको सोंचलाई अलमलाउन सक्दैन। म बिल्कुल प्रतिबद्ध छु। मेरो राजनीतिक यात्रा अहिले भर्खर शुरू भएको होइन। मधेस एकदिन बिल्कुल अधिकार सज्जित हुनेछ। म त त्यो बाटो तयार गर्ने एक पात्र हुँ। सजिलो छैन। तर नहुने होइन। आवाज कसैले थिच्न सक्दैन। यो हराउने पनि होइन। सबलाई अंतर्बोध भएको छ विभेद। आजको पुस्ता हेर्नुस झनै सल्किएका छन।
अनि तपाईलाई गुनासो छैन?
– छ, छैन भने छैन! तर गुनासो राखेर आफ्नो यात्रासङ्ग क्रोधित हुने होइन। ति मधेस विरोधी र मधेस सँग ठगी गर्नहरूलाई समेत सबैले पहिचान गर्दै गरेका छन। सबै कुराको मूल्यांकन हुन्छन। तर मधेस त्यो विषय हो, जसको विनाश कसैले गर्न सक्दैन।
तर मिथिला नी, मधेस भए मिथिलालाई के गर्ने? सितालाई के गर्ने?
– मिथिला र मधेस दुबैको छुट्टै अस्तित्व छ। दुबै रहनेछ। नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक यात्रालाई मधेसले पहिचान मिल्नेछ भने मिथिला मिथि र धार्मिक, सामाजिक , पौराणिक यात्राको अमिट उपज हो। जसको चर्चा सर्वत्र गरिएको छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन।
अनि, चुनावमा होमिने अहिले कुनै रुचि छ कि नै?
– अहिले नै छैन तर राजनीति हो। होइन भने पनि होइन। सेवा गर्ने मौका मिले अहिले र पछि पनि गर्ने नै हो।
Previous घरहरू बचाउन अंतिम समयमा जानकी मन्दिरको पर्खाल तोडिएको हो: वार्ड अध्यक्ष साह
Next मधेसमा नेताको व्यवस्थापन भयो, मुद्दाको व्यवस्थापन भएन